Ruushka iyo Turkiga oo ka tashanaya sidii wax looga qaban laha... | Universal Somali TV
Ruushka iyo Turkiga oo ka tashanaya sidii wax looga qaban lahaa amni darrada waqooyiga Suuriya
Dowladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa la filayaa in ay ka xaajoodaan sidii dagaalyahanada Kurdida looga saari lahaa magaalada Manbij iyo Kobani ee waqooyiga Suuriya inta lagu guda jiro wadahadalada tobaadka soo aadan ay magaalada Sochi, sida uu xaqiijiyay wasiirka arimaha dibada Ankara Mr Mevlut Cavusoglu.
Turkiga ayaa hakiyay duulaanka uu todobaadkii hore ku qaaday waqooyiga Suuriya, kadib wadahadal dhexmaray madaxweyne Tayyip Erdogan iyo madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence.
Dowlada Ankara ayaa dooneysa in aag ka nabdoon colaada ay ka hirgaliso waqooyiga Suuriya si malaayiinta ruux ee suuriyaanka ee qaxootiga ku ah Turkiga ay ugu suura gasho in ay dalkooda dib ugu Laabtaan.
Madaxweyne Donald Trump ayaa bishii hore go,aansaday in 1,000 askari oo ka tirsan milatariga Mareykanka uu ka saaro waqooyiga Suuriya, iyadoo talaabadan ay dhaleeceyn kala kulantay xukuumada Washington.
Dagaalyahanada Kurdida ayaa lagu xasuustaa in kooxda daacish ay ka saareen magaalooyin waaweyn oo ku yaal waqooyiga Suuriya iyaga oo garab ka helaya Mareykanka,
Balse go,aanka Mareykanka ayaa lagu tilmaamay mid qiyaano ku ah dagaalyahanadan, sida ay qabaan madaxda xisbiga Jamhuuriga Mareykanka.
Weerarka Turkiga uu gudaha ugu galay Suuriya ayaa waxaa canbaareeyay madaxweyne bashar Al-Asad waxaana uu ugu baaqay in Turkiga uu tixgaliyo madaxbanaanida dalkan Carbeed.
Si kastaba ha ahaatee wareysi uu siiyay Tv-ga Chanel 7 axada maanta ah wasiirka arimaha dibada Turkiga, Mevlut Cavusoglu ayuu sheegay in magaalada Sochi todobaadka soo aadan ay kulan la xiriira xaalada waqooyiga suuriya ay ku yeelan doonaan madaxweynaha Tayyib Erdogan iyo dhiggiisa Ruushka Vladamir Putin.
Turkiga ayaa cadeeyay in uusan aqbali karin in kurdida ay joogaan xadka uu la wadaago Suuriya waxaana uu gaashaanka u daruuray baaqyo kaga yimid wadamada xukufada la ah Mareykanka.
Kan-xigaSaanad ciidan oo laga dajiyay dakedda...
Kan-horeMaleeshiyada kurdida oo aqbalay dalab...
Somaliya oo diiwaangelisay kiisas kale oo COVID-19 la xiriira
Ciidanka Haramcad oo laga daad-gureeyay Magaalada Dhuusamareeb
Madasha Xisbiyada iyo Guddoonka Golaha Shacabka oo kulmay
Waa maxay ajandaha shirka Magaalada Dhuusamareeb?
Madaxweynaha Hirshabelle oo gaaray Magaalada Dhuusamareeb (SAWIRRO)
54,067,455 unique visits